Ukusebenza womnotho yesimanje ithuba lomsebenzi izigidi zabantu kuwo. Sinenkosi nezinzuzo zazo siqu zezomnotho nezenhlalo okungase ezingqubuzana izithakazelo zabanye amalungu omphakathi.
Trade izinhlangano inyunyana hlanganani ahola amaholo nsuku imikhakha noma emsebenzini ukuze ukuvikela amalungelo abo kwezomnotho. Njengoba izisebenzi endaweni njalo siguqula nakwezomnotho, kwezobuchwepheshe kanye nomphakathi, yini isimo sabo lomthetho njalo uhlangabezana ingcindezi okuhlobene. zinhlekelele Economic nokusongela wehlise inkokhelo. Izinguquko zezenhlalo kuholele nokuncipha imisebenzi. Ngaphandle besebenza ndawonye ukuvikela nokukhuthaza amalungelo abo yomqashwa nezingozi ekubeni ilungu okungavikelekile iningi ubudlelwane kwezomnotho.
Isiko yokudala imifelandawonye ukuze isimiso ukukhiqizwa elisuka ezinsukwini zika feudalism. izinhlangano Isitolo kungaba amelela kwandulela izinyunyana. Naphezu umehluko eliyisisekelo, la mafomu bararulule imiraro engaba efanayo. Uhwebo lokuqala inyunyana usethe ukuvikela amalungelo ahola amaholo, abangu eyasungulwa ekhulwini XIX eNgilandi. Leli lizwe kokudabula i izinguquko kwezezimboni, okwaholela ukuvela ungqimba abalulekile yesigaba sabasebenzi ezimbonini umphakathi British. Ngesikhathi esifanayo, elala isimo senhlalo buthola amandla baqhubeka zingahambelani zakudala, izilungiselelo semi amakhosi asendulo, okuyinto nakanjani kuyoholela ukungqubuzana emphakathini. izinhlangano Inyunyana abizwa ngokuthi eNgilandi the zabasebenzi ziye zaba nomthelela ukufuna ebucayini phakathi izisebenzi kanye nabaqashi, okuvumela ukuba uxazulule izinkinga ngaphandle izinxushunxushu emphakathini.
Nge ukuthuthukiswa ukukhiqiza ezimbonini Empire Russian futhi waqala ukwakha izinyunyana. Ngokwesibonelo, inyunyana of wesitimela abasebenzela, railwaymen ngokuthi, kwadingeka eside isisindo zezombusazwe futhi amathuluzi elinamandla kwezomnotho ukuvikela amalungelo railwaymen. Oku-wamavukelambuso zabasebenzi lisebenzisane amaqembu ezombusazwe sezenhlalo-elincike babethembekile amandla ezinkulu zezombangazwe. Ezikhathini zaseSoviet, izinyunyana elawulwa ngokugcwele nguhulumende. Zonke amabhizinisi akhona eyinhloko izinhlangano inyunyana ukuthi elahlanganiswa zonke-Union Association - Zonke. Phakathi nale nkathi, izinyunyana baye balahlekelwa kakhulu, ukubaluleka zezombusazwe hhayi kuphela, kodwa futhi neminye imisebenzi, abe distributor usizo lomphakathi wombuso.
Nge ekupheleni eSoviet Union yaphela nenkathi kweSoviet zabasebenzi. Ukuncipha ekukhiqizeni, ayehle kakhulu amandla emali, ukuntuleka komsebenzi kubantu abaningi, okwaholela nokucekelwa abalulekile yezenhlalakahle yesigaba sabasebenzi ezimbonini kanye ukubeka ahola amaholo endaweni kwencika eqinile nakho ngeke kusize kakhulu kubaqashi. Ukubuyiselwa ukunyakaza inyunyana waqala ekuqa- enkulungwaneni, kanye izinguquko kwinqubomgomo kwezomnotho eRussia. Namuhla e-Russia kukhona Izinyunyana eziningana ezinkulu, okuyinto united abasebenzi amaphrofayli ezahlukene emnothweni. Isakhiwo ngobukhulu namuhla Federation of Independent Trade Unions atholane Russia, ndawonye abasebenzi million amathathu nesikhombisa. Naphezu isikali yayo, Izici akuyona esinakho kule nhlangano inyunyana, okumelelwe izinhlangano eziningana ezinkulu ngaphezulu. Trade Unions atholane Russia, ngaphezu imisebenzi yansuku zonke ukuqinisekisa kwemalungelo etisebenti, waphawula imihlangano iziteleka eziningana, kusithinta ngempela isikhundla bargaining abaqashi.
ukuhweba Primary inyunyana
At inhliziyo zabasebenzi izinhlangano oyinhloko izimboni kanye izikhungo. Zifeza umsebenzi omningi ukuvikela amalungelo amalungu ayo, inhlangano ye inkhulumomphendvulwano ekuphathweni kanye neziphathimandla. umsebenzi wabo ukuphetha Izivumelwano kanye nokuphathwa, ezilawulwa futhi ichaza zamalungelo neembopho abasayini, izindlela zokubambisana kanye nengxabano. ukuhweba izinhlangano Primary Inyunyana ukulawula indlela ekuphathweni lunikeza ukulondeka emsebenzini, ukuhambisana namazinga sanitary.
Ngaphezu ukuvikelwa ngqo yabasebenzi, izinyunyana ukwenza ezibalulekile umsebenzi ohlangothini ukukhulumisana emphakathini. Nge ukumelwa ephethwe yisigungu sesonto, izakhiwo eziyinhloko ehlangana ku lesifunda izinhlangano inyunyana, okuyinto afakiwe nase-ezinkulu. Ngokwesibonelo, izinhlangano ezinyunyaneni eMoscow bayakwazi ukukhuluma ephathini sina ezingxoxweni hhayi kuphela edolobheni, kodwa futhi ezingeni sikahulumeni. Izinyunyana ezizibandakanyile ekuthuthukisweni kanye ukulungiswa we komthetho wezabasebenzi. Phakamisa izinkinga eziphathelene isiqondiso wezabasebenzi. Bahlanganyele ekwakheni inqubomgomo yezenhlalakahle. Ukusebenza kahle yohwebo imisebenzi inyunyana kuhlobane ngokuqondile ukwehla izinga ukungezwani social ezweni, kanye lithathelwe abasebenzi nokushintsha izimo zomnotho. A emphakathini obuswa ngentando yeningi kusekelwe hhayi kuphela amaqembu ezombusazwe, kodwa futhi phezu izakhiwo zomphakathi, ezihlanganisa izinhlangano inyunyana. Imibiko zezenhlalo ukutadisha izinqubo kwezenhlalo, abonisa ukuthi, naphezu kweqiniso lokuthi yokungavuthwa ezithile noma ukuba buthakathaka zabasebenzi ukuba babhekane kahle nge imisebenzi yabo.
Ubuthongo kangakanani? Worth ayaphenya.